စီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်: Corporate Blogging | Martech Zone
စီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်: Corporate Blogging
စနေနေ့, မတ်လ 12, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 19, 2014 Douglas Karr
ယနေ့နံနက်ငါအပေါ်စိတ်ကူးအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ် စီးပွားရေးရေဒီယိုပြပွဲအတွက်ဖွင့်လှစ် နှင့် တနင်္သာရီ နှင့် Jay Handler ဖြစ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးနေသောကျွမ်းကျင်သောဟောပြောသူများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများက၎င်းကိုနောက်အဆင့်သို့တက်ရန်ကူညီသည်။ ခေါင်းစဉ်, သင်တန်း, ဖြစ်ခဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်!
ပြပွဲကာလအတွင်း ဒန် Waldschmidt ကျနော်တို့ပြပွဲအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိပ်မသွားနိုင်တော့ကတည်းကငါမျှဝေချင်သောစိတ်ကူးမေးခွန်းအချို့ကိုမေးခဲ့တယ်:
အကြောင်းအရာပိုကောင်းအောင်ထက်အများကြီးပိုအရေးကြီးတယ်။ သဘောတူလား မဟုတ်ဘူး။ - အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့ ... ဒါပေမယ့်။ ငါဖောက်သည်များနှင့်အတူဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့ရေးသားနေသည့်အကြောင်းအရာများကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ Search optimization သည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သေချာစေလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စာဖတ်သူများသည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမှဖောက်သည်အသစ်ဖြစ်လာရန်လမ်းကြောင်းပေးလိမ့်မည်။ အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာ လိမ့်မည် နိုင်နှင့်သင်ရလဒ်များကိုရ; သို့သော်ကောင်းမွန်သော optimization သည်။ ည့်သည်များကို ၀ ယ်သူများအဖြစ်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။
ဘလော့ဂါများအတွက်အဓိကအကြံပြုချက် ၄-၅ ကဘာတွေလဲ။ - သင်ကတိပြုထားပြီးပြီဟုမထင်မချင်းမစတင်ပါနှင့်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင် blogging ခေါင်းစဉ်အချို့ရှိသည်၊ သင်အမြဲတမ်းရေးသည်နှင့်သင်ရှိသည် မရပ်ပါနှင့်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ထိန်ချန်ထားရုံသာမကသင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များဂရုစိုက်ပြီးမေးနေသောမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ မင်းစစ်ဆေးပါ ပို့ဖိုင်တွဲ အချို့သောကြီးမြတ်အကြောင်းအရာစိတ်ကူးများသည်။ သင့်ဖောက်သည်နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆက်ဆံရန်လမ်းကြောင်းရှိကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ၄ င်းသည်အဆက်အသွယ်အချက်အလက် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ပါသည့်ဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာတစ်ခု၏ဘေးဘားတန်းမှလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ရှာဖွေမှုအကောင်းဆုံးကိုအခွင့်အလမ်းအဖြစ်မထားပါနှင့် - သင်၏ပလက်ဖောင်း၊ အခင်းအကျင်းနှင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်။ သို့အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အကြောင်းအရာကိုစာရင်းပြုစုနိုင်ပြီးသင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောခေါင်းစဉ်များအတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုသင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
သူတို့မမေးရဲသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကော။ ဒါကတကယ့်အတွေးခေါင်းဆောင်မှုပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမောင်းနှင်လိမ့်မယ်။ လူများစွာသည်သူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုလုံးလုံးလျားလျားအသံဖြင့်ရေးသားကြသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်ရိုးသားမှုတို့သည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသင်အားရိုးသားဖြောင့်မတ်သူနှစ် ဦး စလုံးအားစာဖတ်သူများအားအမှန်တကယ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အောင်မြင်မှုများကဲ့သို့သင်၏မအောင်မြင်မှုများအကြောင်းရေးသားချက်များပါဝင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ့်လူများနှင့်အလုပ်လုပ်ချင်ကြသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီမှကျရှုံးမှုကိုမည်သို့အောင်မြင်ကျော်လွှားသည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အလားအလာများစွာကိုမောင်းနှင်ပေးနိုင်သည်။ ရိုးသားမှုကိုလန်းဆန်းစေပြီးခက်ခဲသောအကြောင်းအရာများသည်အခွင့်အာဏာကိုမောင်းနှင်လိမ့်မည်
အတွက်ညှိပါ စီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်လှစ် 9AM EST မှာစနေနေ့နံနက်တိုင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Trey နှင့်ဂျေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Tags: Blog optimizationအကြောင်းအရာ optimizationJay ကိုင်တွယ်သူစီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်တနင်္သာရီတိုင်း
Leaderpromos.com: အလွန်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်း!
အချက်အလက်များ၏ Visual Display: Omniture vs Webtrends
မတ်လ 14, 2011 မှာ 9: 03 pm တွင်
ဒါဟာ "get" အနည်းငယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးစွာသောအလုပ်တက်ထားပါ။
မတ်လ 14, 2011 မှာ 9: 16 pm တွင်